Siri nri Hat PDF ḷkwa Akwa Nlereanya – The Tailoress
Home / Ngwa / naaa / Siri nri Hat PDF ḷkwa Akwa Nlereanya
Nke a bụ a fun oru ngo na-eme ka onwe gị ma ọ bụ na ụmụ. Ọ bụ nnọọ ihe na ncherita-iru na mfe ịgbakọta-ahapụ ụlọ maka nza nke pụrụ ichetụ n'echiche nke na agba na-eme ka gị na ọhụrụ siri nri okpu na! The okpu e mere na-enwe ihe kemeghi gbalaga nke mere na ọ nwere ike na-agbanwe maka a ihe ọma na ihe kwesịrị ekwesị.
SKU: ChHaPDSePa Categories: Ngwa, Ngwa, Children, naaa Tags: boy, chef, ụmụ, costume, ejiji elu, girl, hat
Pattern includes infant, nwa, youth and adult sizes.
Copyshop size: 40cm x 65cm / A4 peeji nke: 9 / US Letter: 6
Be the first to review “Siri nri Hat PDF ḷkwa Akwa Nlereanya” Kagbuo zara